प्रस्ताव र दशांश को लागी प्रार्थना। ? शक्तिशाली उदाहरण
भेटीको लागि प्रार्थना प्रभुको उपस्थिति अघि हाम्रा सामानहरू प्रस्तुत गर्दा यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ।
प्रस्ताव चर्चको वेदी वा भण्डारमा छोड्न सकिन्छ वा हामी सिधै विशेष व्यक्तिलाई दिन सक्छौं तर हामीले यो बिर्सनुहुन्न कि प्रभु हाम्रो आर्थिक लाभको एक अंश हुनुहुन्छ।
यो सिद्धान्त हो जुन हामी बाइबलमा देख्छौं र त्यसले हाम्रो जीवनमा असंख्य आशिष्‌हरू ल्याउँछ। एउटा भेटी चढाउँदा हामीले अनुग्रहलाई दिइरहेका हुन्छौं जुन हामीले अनुग्रहबाट पाउँछौं र आनन्दित हृदयले गर्नुपर्छ किनकि यो प्रभुले दिने वरदान हो।
1 १) प्रसाद र दशांशको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
2 २) परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न प्रार्थना
3 )) भेटीको लागि नमूना प्रार्थना
3.1 भेटीको लागि प्रार्थना के हो?
3.2 मसीही भेटीको लागि कसरी प्रार्थना गर्ने?
१) प्रसाद र दशांशको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
आज हामी हाम्रो सर्वश्रेष्ठ आय र हाम्रो उत्पादनको प्रस्तावहरू ल्याउँछौं।
हामीले हाम्रो नाफाको एक अंश छुट्यायौं जुन अनुपातमा तपाईं हामीलाई फलिफाइ गर्नुभयो।
हामी यस दिन तपाईलाई के प्रस्ताव गर्छौं खुशी संग हेर्नुहोस्।
हामीले आफ्नो ओठले प्रतिज्ञा गरेका छौं कि हामी तपाईंको सेवा गर्नेछौं, त्यसैले हामी तपाईंलाई स्वेच्छाले तपाईंहरूका लागि ल्याउँछौं।
हामी बुझ्दछौं कि यो तपाईं समक्ष एक गम्भिर क्षण हो, र हामी आज केहि वितरण गर्छौं त्यसप्रति श्रद्धासाथ व्यवहार गर्छौं।
हे परमेश्वर, तपाईंको महिमाको कारण हामी तपाईंको प्रशंसा गर्दछौं। त्यसकारण हामी यी प्रस्तावहरू ल्याउँछौं र तपाईंको अदालतमा आउँछौं।
हाम्रो जीवनलाई परिष्कृत गर्न र शुद्धिकरणको लागि धन्यबाद, किनभने आज हामी बुझ्दछौं कि यी प्रस्तावहरू तपाईंको महानता र तपाईंको सार्वभौमिकताको न्यायमा प्रस्ताव गरिएका छन्।
हाम्रो आराधनाको प्रकटन तपाईंलाई मनपर्दछ।
हामी तपाईंको नामको कारण महिमा प्रदान गर्दछौं किनकी हामी तपाईंको प्रस्ताव लिएर आउँछौं र तपाईंको अगाडि आउँछौं। हे प्रभु, हामी तपाईंलाई प्रेम गर्छौं
आज हामी स्वैच्छिक बलिदानहरूमा योगदान पुर्‍याउँदा रमाइलो गर्नेछौं, किनकि पूर्ण हृदयले हामी यो गर्छौं।
ठूलो विश्वासका साथ भेटी र दशांशका लागि यो प्रार्थना गर्नुहोस्।
प्रस्तावना र दशांश एक बाइबलीय सिद्धान्त हो जुन केवल प्रकाशद्वारा गरिन्छ किनकि यो आलोचनाको कुरा हुन्छ जुनसँग यी सिद्धान्तहरू हुन्छन् र दैनिक जीवनमा लागू गर्दछन्।
बाइबलमा हामी देख्छौं कि आफ्नो दशांश जम्मा गर्ने व्यक्तिहरू जीवनको हरेक अर्थमा समृद्ध मानिसहरू हुन्।
प्रसाद भनेको हाम्रो हृदयबाट आउने सबै चीज हुनसक्दछ, तर दशांश, जुन प्रभुको हो, हाम्रो नाफाको दश प्रतिशत हो, चाहे मौद्रिक होस् वा अन्यथा।
यो वचनले हामीलाई सिकाउँछ कि परमेश्वर आफैंले भस्म गर्नेहरूलाई हप्काउनुहुन्छ जबसम्म हामी समयमै दशांश प्रदान गर्दछौं र हृदयले आनन्दले भरिपूर्ण छौं।
२) परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न प्रार्थना
«तपाईले मलाई दिनु भएको सबैका निम्ति प्रभु धन्यबाद हुनुहुन्छ, तपाईंले मलाई बढाउनु भयो।
मलाई थाहा छ कहिलेकाँही म तपाईंप्रति धेरै आभारी छु, तर यस पटक म हुनेछु।
मैले आज कटाई गरेको सबै तपाईंलाई धन्यबाद बृद्धि भएको छ।
तपाईंले मलाई एक राम्रो व्यक्ति बनाउनु भएको छ।
मेरो परिवार, मेरा साथीहरू, नजिकको मान्छे को लागी धन्यबाद।
मलाई जीवनको एक दिन दिनको लागि धन्यवाद,
एक दिन तपाइँको प्रशंसा र प्रशंसा गर्न, तपाइँलाई माया गर्न।
तपाई बिना यो कोही पनि हुँदैन, प्रभु धन्यबाद।
म तपाईलाई मेरो debtण कहिले पनि तिर्न सक्दिन, तपाईले मलाई दिएको सबै चीजको लागि तपाईलाई तिर्न।
प्रस्तावहरू, यदि हामीले उनीहरूलाई भण्डारगृहमा छोड्छौं वा कसैलाई दिन्छौं भने, यो स्वर्गमा प्राप्त गर्ने उही परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ आफैंले महिमामा पाएको धन सम्पत्ती अनुसार हामीलाई पुरस्कार दिनुहुनेछ।
कल भनेको हर्षित हृदयले भेटीहरू ल्याउनु हो किनभने शब्दले हामीलाई भन्छ कि उसले हंसमुख उपहारलाई आशिष् दिन्छ त्यसैले हामी कटुताले भरिएको हृदयले केहि दिन सक्दैनौं तर हामी के दिनको लागि खुसी छौं।
)) भेटीको लागि नमूना प्रार्थना
आज हामी हाम्रो प्रस्ताव र हाम्रा भिक्षाहरू लाई हाम्रो आम्दानी र उत्पादनको उत्तममा ल्याउँदछौं।
हामीले हाम्रो आयको एक अंश अलग गरेका छौं,
समान अनुपात जुन तपाईले हामीलाई समृद्ध बनाउनु भएको छ।
खुशीको साथ हेर्नुहोस् र यो दिन हामी तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ के प्रेम।
हामीले आफ्नो ओठले हामीसँग तपाईंको सेवा गर्ने वाचा गरेका छौं,
त्यसकारण हामी स्वेच्छा र निस्वार्थ रूपमा तपाइँलाई हाम्रो प्रस्तावहरू ल्याउँछौं।
हामी बुझ्दछौं कि यो तपाईं समक्ष औपचारिक क्षण हो,
र हामी शिष्टाचारको साथ व्यवहार गर्छौं र हामी आज के वितरण गर्छौं ख्याल राख्छौं।
हे परमेश्वर, तपाईंको महिमाको कारण हामी तपाईंको प्रशंसा गर्दछौं।
त्यसकारण हामी यी बलिहरू लिएर आउँछौं र तपाईंको मन्दिरमा आउँछौं।
नरम बनाउने, शुद्धिकरण र हाम्रो जीवनलाई बचाउनु भएकोमा धन्यवाद।
किनभने आज हामी बुझ्दछौं कि यी प्रस्तावहरू तपाईंको महानता र तपाईंको सार्वभौमिकताको न्यायमा प्रस्ताव गरिएको छ।
हामी तपाईंको नामको कारण महिमा प्रदान गर्दछौं किनकि हामी हाम्रो भेटी लिएर आउँछौं र तपाईंको अगाडि आउँछौं, हामी तपाईंको आराधना गर्दछौं प्रभु।
आज हामी स्वैच्छिक भेटी र भिक्षाका साथ योगदान दिएर रमाउनेछौं, किनकि सम्पूर्ण हृदयले हामी यो गर्छौं।
यस अर्थमा हामी देख्छौं कि उही शब्द परमेश्वर असंख्य उदाहरणहरूले भरिएको छ। ती मध्ये एक र सब भन्दा बलियो हामी उनलाई विश्वासको पिता भनेर चिनिन्छ जो उही अब्राहम मा देख्न, उहाँ परिक्षण गरिएको थियो र प्रभु ईश्वरले उहाँलाई एक बाछो प्रदान गरेनन् भने आफ्नै छोरा बचाउन सक्षम थियो।
यहाँ हामी आज्ञाकारिताको उदाहरण देख्छौं र यस्तै अरू धेरै छन् जुनबाट हामी बाँकी जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू सिक्न सक्छौं।
भेटीको लागि प्रार्थना के हो?
हामी चढाइएको समयमा प्रार्थना गर्दछौं प्रभुले हामीले गरिरहेको काममा आशिष्‌ दिनुहुन्छ। हाम्रो वित्तिय गुणकलाई उही परमेश्वर हुन, यो आवश्यक व्यक्तिलाई दिनको लागि हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्न र हाम्रो हृदयमा बलिदान दिन सधैं हाम्रो चाहना हुन्छ
यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि प्रस्तावहरू सधैं नगदमा हुँदैन तर केही पनि गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी फल र फूलको प्रसाद हेर्न धेरै सामान्य छ र सबै प्रभु द्वारा प्राप्त गरीन्छ।
मसीही भेटीको लागि कसरी प्रार्थना गर्ने?
यो, जस्तै सबै प्रार्थना, यो हाम्रो हृदयको गहिराईबाट र हामी के गर्दैछौं भन्ने बारे पूर्ण जागरूकताबाट गरिनुपर्दछ।
धेरै चोटि, भेटी शारीरिक रूपमा भएको हुनाले, हामी यो जान्दैनौं कि यो एक आध्यात्मिक कार्य हो र यो त्यस्तो सिद्धान्त हो जुन हामी कुनै पनि हिसाबले बिर्सन सक्दैनौं किनभने परमेश्वर स्वयम् हुनुहुन्छ जसले हाम्रो भेटी ग्रहण गर्नुहुन्छ र हामीलाई आफ्नो सम्पत्ति अनुसार पुरस्कार दिनुहुन्छ। महिमा
विश्वासको साथ गरेको शक्तिशाली बलिदान र दशांशको लागि प्रार्थना हो, परमेश्वर स्वयम्ले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ र उहाँ हामीजस्तै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ जुन शारीरिक वा आध्यात्मिक हो, हामीले आत्माबाट सधैं प्रार्थना गर्नुपर्छ र सबै कुराको सृष्टिकर्ता र सबै मालिकको परमेश्वरसँग सिधा सम्पर्क राख्नुपर्दछ। ।